Etu aga-esi dee ọdịnaya ebe ndị ọbịa bịara mata uru ị bara | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 3, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 3, 2013 Douglas Karr
Agbanyeghị na price, uru ahịa na-ekpebisi ike mgbe niile. Ọtụtụ mgbe, uru ahụ ga-adabere na nke ọma ndị ahịa na-eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ọtụtụ ndị na-ere ngwanrọ ma ọ bụ ndị na-ere ọrụ (SaaS) na-eji ire ahịa bara uru iji chọpụta ego ha. Nke ahụ bụ, kama ịkwụ ụgwọ ọnụego kwa ọnwa ma ọ bụ ọnụego dabere na ojiji, ha na ndị ahịa na-arụ ọrụ iji chọpụta uru ikpo okwu nwere ike ịnye wee rụọ ọrụ ahụ na ọnụahịa dabara adaba maka ndị abụọ ahụ.
Nke a bụ ihe atụ marketing email ahịa. Enwere m ike ịdebanye aha maka ọrụ ịre ahịa email maka $ 75 kwa ọnwa ma ọ bụ soro ndị ọrụ mbido maka $ 500 kwa ọnwa. Ọ bụrụ na anaghị m akwalite email na jiri ya bulie, nweta ma ọ bụ jigide ndị ahịa, $ 75 kwa ọnwa bụ nke obere uru na nwere ike ịbụ ukwuu ego imefu. Ọ bụrụ na m gara na $ 500 kwa ọnwa ọrụ ha nyere aka zụlite ozi m, nyeere m aka mejuputa mkpọsa maka mbugharị, nnweta na njigide… M nwere ike ịga nke ọma na itinye ego email ka mbanye ọtụtụ narị puku dollar. Nke ahụ bara nnukwu uru ma baa uru na ego a kwụrụ.
Enwere ihe kpatara ndị ahịa jiri percentages na ihe ngosi ha iji nye ihe akaebe nke abawanye uru maka ngwaahịa na ọrụ ha. Ọ bụrụ na m gbanwere ngwaahịa gị ma ọ nwere ike ịchekwa m 25% na ụgwọ ịkwụ ụgwọ m, dịka ọmụmaatụ, nke ahụ pụtara ọtụtụ puku dollar na azụmahịa. Ma ọ bụrụ na azụmahịa gị na-akwụ ụgwọ ọtụtụ nde dollar, uru nke ngwaahịa a dị ukwuu, nke dị elu karịa azụmahịa gị karịa nke m.
Ndị na-ere ahịa na-emehiekarị nke ịkọwa a ihe bara uru bara uru nke ahụ na-akọwa uru dị iche iche dabere n'echiche ha. Nke a nwere ike iduga ọdịiche dị n’iche n’etiti ihe ị chere n’uru gị bụ na ihe onye ahịa na - achọpụta uru ị bara. Otu ihe atụ: Anyị na ọtụtụ ndị ahịa na - arụ ọrụ na njikarịcha Ngini Nchọpụta ha. - Ndị ahịa ndị nwere nyiwe siri ike, ahịa agile na usoro mmepe, ma nwee ike mejuputa mgbanwe dị mkpa iji zaghachi ihe ndị ọrụ ọchụchọ na-enweta bara uru site na ọrụ anyị. Ndị ahịa na-anaghị ege ntị, anaghị etinye mgbanwe ahụ, ma na-agbagha ndụmọdụ anyị na-ata ahụhụ mgbe niile ma ha anaghị amata uru zuru oke anyị nwere ike ịnye.
Ka ị na-ede ọdịnaya ahịa gị, enwere usoro ga - enyere aka:
Jiri pasent na-ekwu okwu na uru gị bara uru ka ndị ọbịa wee mee mgbakọ na mwepụ ma gbakọọ ego na ndozi na nkwupụta ha na-enweta karịa ndị ahịa gị.
Nye usoro ihe omume, ọmụmụ ihe, na omume kachasị mma nke na-enyere ndị ọbịa gị aka ịchọpụta uru ị bara na nzukọ ha.
Nye ọdịnaya na-agwa ndị ọrụ aka kpọmkwem, ụdị ụlọ ọrụ, na ndị na-ege ntị ka ndị ọbịa gị wee hụ myirịta dị n'etiti ọdịnaya gị na azụmaahịa ha.
Nye ihe akaebe site na ọtụtụ ndị ahịa, aha ha na ọnọdụ ha na ụlọ ọrụ ahụ, ka ndị na-eme mkpebi kwekọrọ na aha na ọnọdụ ndị ahụ wee nwee ike ịmata ha.
Fọdụ ndị folks kwenyere na ịre ahịa ahịa na ire ahịa dịtụ aghụghọ. Ha kwenyere na onye ọ bụla kwesịrị ịkwụ ụgwọ otu ihe. M ga-arụ ụka na-abụghị. Ndị ụlọ ọrụ nwere ọnụahịa ewepụghị n'agbanyeghị na ọ naghị aza maka ndị ahịa na otu ha nwere ike isi leverage ngwaahịa na ọrụ gị. Ọbụna nke ka njọ - ahia nke na-ekwe nkwa nleta, ogo, ego, na ihe ndị ọzọ. Ha na-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ, itinye aka na ego iji mefuo ego gị wee pụọ mgbe ị nwetaghị nsonaazụ ha kwere. Ọ ga-akara m mma iso onye na-ere ahịa gere m ntị, ghọta ihe m nwere, mata mkpa m, ma rụọ ọrụ iji nye ọnụahịa nke mezuru mmefu ego m ma nye uru m chọrọ.
Tags: uruechiche bara uruuru ireere ahịa bara uru
Nyocha data nyocha 2012